Kachasị Webinar gị mmefu: Webinar ROI Calculator | Martech Zone
Ndi ị maara nke ahụ, ná nkezi, Ndị na-ere ahịa B2B jiri ụzọ aghụghọ 13 dị iche iche maka òtù ha dị iche iche? Amaghị m banyere gị, mana nke ahụ na-enye m isi ọwụwa naanị na-eche banyere ya. Otú ọ dị, mgbe m chere banyere ya, anyị na-enyere ndị ahịa anyị aka itinye ọtụtụ usoro ahụ kwa afọ na ọnụọgụgụ ahụ na-arịgo elu ka ndị na-ajụ ase na-abawanye ụba. Dị ka ndị ahịa, anyị kwesịrị ibute ụzọ na ebe anyị ga-eji oge anyị ma ọ bụ na anyị agaghị eme ihe ọ bụla!
Ihe dị ka otu afọ gara aga, anyị malitere ịrụ ọrụ na ReadyTalk, a webinar software n'elu ikpo okwu, anyị weputara usoro ntanetị nke anyị iji hụ ihe niile gbasara nsogbu ahụ. Anyị mepụtara ihe karịrị 600 na-eduzi oge webinars 3 maka ndị mmekọ anyị, ihe dịka 25 - 30% n'ime ha tụgharịrị bụrụ ndị ruru eru. Ọ baghị uru ikwu, webinars ghọrọ otu n'ime anyị n'elu kwe nkwa maka ahịa si eme na 2014.
Maka ụfọdụ ịgụkwu na nkwalite webinar, gụọ akụkọ m na ndụmọdụ gbasara webinar, Atụmatụ 10 iji kwalite Webinar na-esote.
Mgbe anyị na - ebute ndị ahịa anyị ụzọ, anyị na - ele ROI nke mbọ anyị anya na ndị na - eme mgbanwe ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na anyị na-ahụ mgbanwe na webinars, anyị chọkwara ịgbakọ ROI. Nke ahụ bụ mgbe anyị kpebiri ijikọ ọnụ na ReadyTalk ma mepụta ihe mgbako na-enye nke ahụ: ngụkọta oge na webinar ROI.
Ma ị jirila webinars n'oge gara aga ma ọ bụ na ị na-amalite, ịnwere ike iji nke a mgbako ka:
Chọpụta ihe usoro ntanetị gị / ga-efu gị,
Nweta ndụmọdụ maka ROI ka mma,
Tụlee ụgwọ gafee ngalaba, na
Kpebie otu ị ga - esi eji webinars maka nzukọ gị.
Chọpụta webinar gị ROI ugbu a:
Jiri ReadyTalk's ROI Calculator
ngosi: Njikere bụ onye ahịa nke anyị na onye nkwado nke Martech Zone.
Tags: Webinar AhịaReadyTalk mgbakoroi ngụkọta ogeroi mgbakoogbako weebụNzukọ weebụnzukọ weebụwebinar roi